Qatar oo ka jawaabtay qorshaha Trump ee Falastiin iyo Israel
Qatar ayaa si taxaddar leh uga jawaabtay qorshaha nabadda Falastiin iyo Israel ee uu Talaadadii ku dhowaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Qatar ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso dadaal kasta oo lagu helayo “nabad waarta”, hase yeeshee waxay ka digtay inaan taas lagu guuleysan karin haddii aan ogolaansho laga helin Falastiiniyiinta.
“Qatar waxay soo dhoweeneysaa dhammaan dadaallada ku wajahan nabad waarta oo laga gaaro dhulka la haysto ee Falastiin, waxayna ka mahad-celineysaa dadaallada maamulka Mareykanka ee xal loogu helayo dagaalka Israel iyo Falastiin,” ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey wakaaladda wararka dalkaas ee QNA.
“Qatar waxay dib u xaqiijineysa taageerada ay u hurto hay’adaha dowliga ah ee Falastiin, ayadoo muujineysa in nabad aan la heli karin haddii aan la ilaalin xuquuqda Falastiin ay u leeyihiin dal madax banaan oo caasimaddiisu tahay Bariga Qudus, iyo tan dadka Falastiin ay dib ugu soo laabanayaan,”
Qorshaha Trump ayaa Israel siinaya in badan oo ka mid ah wixii ay ku raadineysay diblomaasiyadda caalamiga, oo ay ugu weyn tahay magaalada Qudus oo aan la kala qeybin oo noqoneysa caasimaddeeda, intii ay la wadaagi lahayd Falatsiiniyiinta.
Qorshaha ayaa sidoo kale Israel u ogolaanaya iany qaadato dhulka Daanta Galbeed ee ay deegaameysay.
Qatar ayaa taageerta qadiyadda Falastiin, waxayna horey u marti-gelin jirtay hoggaamiyayaasha kooxda Xamas, ee maamusha Gaza.
Dalkan hodanka ku ah gaaska ayaa sidoo kale malaayiin dollar oo gargaar ah siiya Gaza, si loogu maal-geliyo warshadda kaliya ee korontada siisa magaalada, iyo lacag kaash ah oo loo qeybiyo qoysaska liita.
Qatar ayaa sidoo kale xulufo weyn la ah Mareykanka, waxayna marti-gelisaa saldhigga militari ee ugu weyn ciidamada Mareykanka ee gobolka.